Raha ny amin'ny zavatra tsy afaka iainantsika tsy misy, sushi matsiro tokoa no hita eo. Matotra, raha miankina amintsika izany, dia hanoritsoritra sary hosodoko sy sary sokitra isika 24/7 satria tena misy ny fitiavantsika. Ary azontsika antoka .....
Tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny ahidrano roasted
Ny ahidrano Nori dia sokajiana ho legioma, anana an-dranomasina izay. Ny sasany amintsika dia mety mbola tsy mbola nanandrana ahidrano taloha fa ny Japoney dia efa nihinana an'io sakafo be io nandritra ny taonjato maro ......
Ny ahitra dia tsara ho an'ny fahasalaman'ny vatana rehetra, na anatiny na ivelany .....
Ny Sushi dia karazana sakafo iray
Sushi dia karazana sakafo. Avy any Japon i Sushi, ary manana tantara efa ela. Izy io dia lovia malaza any Amerika, UK, ary firenena maro hafa. Ny karazana sushi rehetra dia misy karazana .....
Fomba mora hanampiana karazan-tsakafo ahiana ho sakafonao
Tsy mila manara-maso akaiky ny vata fampangatsianao ianao mba hampidirana karazan-dranomasina ny sakafonao. Mampiasà toro-hevitra vitsivitsy vitsivitsy hanombohana ny fampiasana azy amin'ny sakafo efa azonao ....
Ny voan-tsakafo manta dia loharano iodine tsara
Ny voan-tsakafo voaendy dia loharano iodine, misy fanompoana iray misy 65 isan-jaton'ny vola tokony hofidinao isan'andro. Ny tiroida dia miankina amin'ny iode mba hiasa .....